I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguDawn
Yonwabela iChatfield entle edolophini, iNtili ekhethiweyo, kwigumbi lakho lokulala eli-2 le-2ND FLOOR ephezulu. Uhlaziywe ngokupheleleyo kwaye ubekwe amanyathelo kude nemivalo, iivenkile zokutyela kunye neevenkile ezincinci zolonwabo iChatfield kufuneka ibonelele. Chitha imini uhleli kumgangatho wophahla okanye emva kokuhamba ngebhayisekile kwiindlela zaseLanesboro. Relax kwaye ucwilise kwi-tub yakho yabucala eshushu. Ifanelekile kwimpelaveki yokurhoxa kwentombazana okanye kwiholide yosapho, indawo yethu yokuhlala iqinisekile ukuba iyakukholisa. Yonke into igutyungelwe. Yonwabela ibhotile yewayini ebulelayo kuthi.
Eli ligumbi lokulala eli-2 eligcwele ngokupheleleyo, i-1 yokuhlambela, i-2nd floor loft. I-intanethi kunye nentambo esisiseko ibandakanyiwe. 2nd tv kwigumbi lokulala elikhulu. Ibhafu eshushu ebekwe kumgangatho wophahla.
55" TV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo
I-Chatfield yidolophu encinci ezolileyo enobuhlobo ukuhlala kuyo. Ineecawe ezininzi, iipaki, imveliso yethiyetha kunye neendawo ezininzi zokuphumla ezinokutyelela. Yehla ngeRoot River kwaye wonwabele ipikiniki ezolileyo, kumgama wokuhamba.
Hi. My husband John & I run a small business in Chatfield, MN. We sell window treatments & also own & manage a residential home rental business. We have been married since 1981 and have 3 sons & 2 grandkids. We love spending time with our family & love going on vacation. We hope you enjoy your stay at our rental homes. One in Minnesota and the other in Florida. Thanks for looking!
Abanini bafumaneka ngefowuni okanye ngetekisi. Ibekwe imizuzu kude. 507.696.0902 okanye 507.421.1731.